EU Provides €37.625 Mln to Myanmar for Education Reform | Myanmar Business Today
HomeBusinessEU Provides €37.625 Mln to Myanmar for Education Reform
EU Provides €37.625 Mln to Myanmar for Education Reform
The European Union (EU) disbursed €37.625 million [59.693billion MMK] to further support education reform in Myanmar.
The grant is paid earlier than planned to help the Government address the exceptional needs that arose due to COVID-19 and ensureasafe return to school for all children. This is the third payment fromatotal of €221 million (MMK 382 billion) provided by the European Union to increase access to quality education for all in Myanmar.
The disbursement followed an Education Sector Reform Policy Dialogue meeting between the Government and the European Union, in particular on the plans for reopening schools as well as access to education in Rakhine State and public financial management
“The European Union isatrusted partner. Its support will help us make sure that every child in Myanmar has access to education post-COVID-19. At the same time, we will be able to continue our reform and roll out our new curricula,” Union Minister for Education Dr. Myo Thein Gyi said.
“The re-opening of schools has been debated throughout the world. I am encouraged by the Government’s efforts to make schools safe ‘post COVID-19’ for all children in Myanmar while keeping the pace for the ambitious reform of the education sector,” said EU Ambassador Kristian Schmidt.
The Ministry of Education prepared for the re-opening of schools on July 21 by planning for additional classrooms, introducing shifts in schools, and procedures for school meals and transport.
Teachers will learn the new curriculum online through the Myanmar Education Development Platform. To support the management of more digital teaching resources, preparations are underway to provide tablets to schools and teachers. Importantly, the Ministry of Education will evaluate the situation of each school individually and adapt to local situations.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုအဖြစ် ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)သည် ယူရိုငွေ ၃၇ ဒသမ ၆၂၅ သန်း (ကျပ်ငွေ ၅၉ဒသမ၆၉၃ ဘီလီယံ) ပေးအပ်ခဲ့သည်။
အစိုးရကို အကူအညီပေးရန်နှင့် ကလေးသူငယ်များအားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကျောင်းပြန်တက်နိုင်စေရန်အတွက် ဤရန်ပုံငွေကို ယခင်က စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်မတိုင်မီ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဥရောပသမဂ္ဂက ထောက်ပံ့သော စုစုပေါင်း ယူရိုငွေ ၂၂၁ မီလီယံ [ကျပ်ငွေ ၃၈၂ ဘီလီယံ] အနက် ဤပေးချေမှုသည် တတိယအရစ်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပညာရေးလက်လှမ်းမီရရှိရေး နှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲရေးတို့အကြောင်းကို အစိုးရနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသော ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ဤထောက်ပံ့မှုကို ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက “ဥရောပသမဂ္ဂဟာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပါ။ ကိုဗစ် – ၁၉ ကာလအလွန်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီစေရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်တွေကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
“ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြတာပါ။ အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေအားလုံးအတွက် ‘ကိုဗစ် – ၁၉ အလွန်’ မှာ ကျောင်းတွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အတွက် အားတက်မိပါတယ်”ဟု EU သံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt က ပြောကြားခဲ့ သည်။
“ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းမှာကလေးတွေကို ချန်လှပ်မထားခဲ့မိဖို့ အာရုံစိုက်ရပါမယ်။ ရေရှည် တည်တံ့အောင် နာလန်ထူနိုင်ဖို့၊ အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကြိုတင် ကာကွယ်ပြီး ပိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီကလေးတွေ ပညာရေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေကို ဆက်ပြီးလက်လှမ်းမီသင်ယူနိုင်နေဖို့က အဓိကပါပဲ” ဟုလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဇူလိုင်(၂၁)ရက်နေ့တွင် ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် စာသင်ခန်းများ ထပ်မံ စီစဉ်ခြင်း၊ ကျောင်းများတွင် အချိန်ခွဲသင်ကြားခြင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းတွင် အဟာရတိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် ကျောင်းအကြိုအပို့ကားများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ဆရာ/ဆရာမများသည် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပလက်ဖောင်း (Myanmar Education Development Platform – MDEP)မှ တစ်ဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ကို သင်ယူ ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူပြုရန် ကျောင်းများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများအား tablets များ ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့နိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အထူးအရေးကြီးသည်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းတစ်ခုစီတိုင်း၏ အခြေအနေကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီး ဒေသန္တရအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မွမ်းမံပြောင်းလဲရမည် ဖြစ်သည်။
Previous article16,350 Acres Taken Back from Companies for Failing to Implement Anything
Next articleChina and Myanmar Seek Ways to Streamline Trade During the COVID-19